Oby Ezekwesili ejirila ụkpa ekele malite ịchụ nta vootu ya - BBC News Ìgbò
Oby Ezekwesili ejirila ụkpa ekele malite ịchụ nta vootu ya
Akụkọ dị mkpa
Nkenke aha onyonyo Ezekwesili bidoro otu #BBOG iji gbapụta ụmụaka Chibok
Oby Ezekwesili ọ ga-azọtanwu ọkwa onyeisiala? O ji inye ụkpa ekele n'ụlọụka bido usoro ngagharị n'ime obodo nke Bekee kpọrọ "campaign" ya.
Skip Twitter post by @obyezeks
As we kick off our campaign officially today, we start with a thanksgiving service. For the grace to embark on this hard task of rescuing our country, for the wisdom and the guidance here… https://t.co/sOE0Nm1Rbl
— Oby Ezekwesili (@obyezeks) 18 Novemba 2018
End of Twitter post by @obyezeks
Ebe onyeisiala Muhammadu Buhari ga-amalite campaign nke ya n'ime Aso Villa dị n'Abuja, dịka Inec si nye ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ohere imalite ya.
Akụkọ na-eru anyị ntị site n'akwụkwọ ozi Guardian na-ekwu na Kingsley Moghalu na-azọ ọkwa onyeisiala ahọpụtala Oriakụ Umma Getso dịka osote ya ka ha na-azọ ndọrọndọrọ n'okpuru pati ya bụ Young Progressives Party.
Na mba ofesi,
Ihe merụrụ ahụ na ngagharịiwe ndị mba Frans malitere ime n'izu a eruola mmadụ narị anọ.
Cheta na ọtụtụ mmadụ ruru puku narị abụọ na iri asatọ pụtara ime ngagharịiwe maka mbuli mmanụ ụgbọala gọomentị ha na-akwado ime.
Enweghị ebe otu Tanzania nke Emmanuel Amuneke na-achịkọta, ji azụ aga ka ha na-achụ isonye Iko Mba Afrịka makana Lesotho meriri ha.
Saụt Afrịka merikwara otu egwuregwu ụmụnwaanyị Naịjirịa bụ "Super Falcons" n'egwuregwu nke mbụ ha na-agba n'asọmpi AWCON bụ Iko Mba Afrịka nke ụmụnwaanyị.
Skip Twitter post by @NGSuper_Falcons
FT Nigeria 0-1 South Africa. Disappointing start for us, but we shall bounce back. #SoarSuperFalcons #Team9jaStrong #NGARSA #TotalAWCON18
— NGSuper_Falcons (@NGSuper_Falcons) 18 Novemba 2018
End of Twitter post by @NGSuper_Falcons
Ha ga-ezute otu Zambia n'egwuregwu ọzọ ha ga-agba.
Ebe Ịngland ji ọkpụ goolu abụọ merie Kroeshia n'asọmpi UEFA nations League.
Ndị ụlọomeiwu ukwu ekwuola na ha nwere ike ịmalitere kọmịtii ga-enyocha osote onyeisiala bụ Yemi Osinbajo n'ihe gbasara ego Naịjirịa ruru ijeri naira iri atọ na atọ e tinyere aka maka ọrụ gbatagbata n'ọwụwa anyanwụ ugwu Naijiria.
Mana Osinbajo na-ekwu na o nweghị njọ ya mere maka na ego ahu bụ ego enyemaka ga-akwado ndị bi n'Ugwu.
Ihe mberede ụgbọala egbuola mmadụ na Ebonyi
N'Ebonyi mmadụ ise anwụọla na ihe mberede ụgbọala mere n'Akpoha n'okporoụzọ Afikpo na Abakaliki.
Cheta na mmadụ abụọ ọzọ nwụrụ n'ụbọchị ole na ole garaga n'okporoụzọ ahụ.
WHO agbaala ọsọ ndụ na Kongo
Otu World Health Organisation esepụla aka enyemaka n'ịkwụsị ọrịa Ebola na mba Kongo dịka ha kpọpụtara ndị ọrụ ha na mba ahụ maka nnukwu agha na-ada n'ala ahụ ugbua.
Trump agaala ebe ọkụ na-agba na Kalifonia
N'ofesi, onyeisiala Amerika bụ Donald Trump agaala obodo Kalifonia ebe nnukwu ọkụ legburu mmadụ iri asa na isi ma repịa ọtụtụ ụlọ.
O kwuru na ọkụ mberede a bụ nke kachasị njọ n'ala ahụ .
Lee ndị na-azọ ọkwa ọkachaagba bọọlụ Afịrịka
Nkenke aha onyonyo Medhi Benatia, Kalidou Koulibaly, Sadio Mane, Thomas Partey na Mohamed Salah (site n'aka ekpe rue n'aka nri) bụ ndị a họpụtara.
N'egwuregwu, Medhi Benatia, Kalidou Koulibaly, Sadio Mane, Thomas Partey na Mohamed Salah bụ ndị ga-azọ ọkwa ọkacha agba bọọlụ n'Afrịka n'ime afọ na nturuugo nke ụlọọrụ BBC wepụtara.
Cheta na ọ bụ Salah bụ onye nwetara nzerea n'afọ gara aga.
Gee akụkọ BBC n'otu nkeji ebe a:
Lee ihe nkiri anyị :
Media captionBuchi: Ihe ndị ị maghị maka otiegwu ụka a
Ọ ga-amasị m ịlụ di nke ugboro atọ ma mụọ nwa ọzọ - Anne Njemanze